Nzọụkwụ 10 iji mepụta nyocha dị n'ịntanetị dị irè | Martech Zone
Na Tọzdee, Septemba 27, 2011 Tọzdee, Septemba 19, 2013
Ngwa nyocha ntanetị dị ka Zoomerang bụ kediegwu maka n'ụzọ dị irè na-arụ ọrụ nke ọma na-achịkọta ma na-enyocha data. Ihe omuma a na-achota na ntanetị na-enye gi ozi doro anya maka mkpebi ahia gi. Kwụ ụgwọ oge dị mkpa na iwulite nnukwu nyocha ịntanetị ga-enyere gị aka iru ogo nzaghachi dị elu, data dị elu karịa ma ọ ga-adịrị ndị na-azaghachi gị mfe.
Lee usoro 10 iji nyere gị aka mepụta nyocha dị irè, dịkwuo omume ọnụego gị nnyocha e mere, na melite ogo zuru oke nke data ị chịkọtara.
Kọwaa nke ọma ebumnuche nyocha gị - Ezi nyocha emeela ka ebumnuche ndị dị mfe nghọta. Wepụta oge tupu gị amata ebumnobi gị. Ọganihu na-aga n'ihu na-enyere aka hụ na nyocha ahụ jụrụ ajụjụ ziri ezi iji mezuo ebumnuche na iwepụta data bara uru.
Mee ka nyocha ahụ dị mkpụmkpụ ma lekwasị anya - Short na lekwasịrị anya na-enyere ma àgwà na nke ukwu nke Ibọrọ. Ọ ka mma ilekwasị anya n'otu ebumnuche karịa ịnwa ịmepụta nyocha nna ukwu nke kpuchiri ọtụtụ ebumnuche. Zoomerang nyocha (yana Gallop na ndị ọzọ) egosila na nyocha ga-ewe nkeji 5 ma ọ bụ obere karịa iji mezue. Nkeji 6 - 10 na-anabata ma anyị na-ahụ nnabata gbapụrụ agbapụ na-eme mgbe nkeji iri na otu.
Mee ka ajụjụ ndị ahụ dị mfe - Gbalịsie ike na ajụjụ gị eruola isi ma zere iji jargon, slang ma ọ bụ acronyms.
Jiri ajụjụ mechiri emechi mgbe ọ bụla enwere ike - Ajụjụ ndị emechiri emechi na-enye ndị zaghachiri nhọrọ (dịka Ee ma ọ bụ Mba), na-eme ka ọ dịkwuo mfe nyochaa nsonaazụ. Emechibidoro ajụjụ nwere ike were n'ụdị ee / mba, ọtụtụ nhọrọ ma ọ bụ akara ogo.
Debe ajụjụ ọnụ ọgụgụ na-agbanwe agbanwe site na nyocha ahụ - Akpịrịkpa ogo bụ ụzọ dị mma iji tụọ ma tụọ usoro nke ndị mgbanwe. Ọ bụrụ nhọrọ iji akpịrịkpa akara (dịka site na 1 - 5) debe ya oge niile na nyocha ahụ. Jiri otu ọnụ ọgụgụ nke isi na ọnụ ọgụgụ ma hụ na pụtara nke elu na ala ọnụnọ agbanwe agbanwe ofụri nnyocha e mere. Ọzọkwa, jiri ọnụọgụ abụọ na ọkwa gị iji mee ka nyocha data dị mfe.
Ezi usoro ịtụ --Gbaa mbọ mee ka nyocha nyocha gị na-aga n’usoro ezi uche dị na ya. Bido na okwu mmeghe dị mkpali nke na-akpali ndị na-eme nnyocha iji mezue nnyocha ahụ (wdg. Ọzọ, ọ dị mma ịmalite site na ajụjụ sara mbara wee kwaga n'ebe ndị wara wara wara. N'ikpeazụ, nakọta data omume igwe mmadụ ma jụọ ajụjụ ọ bụla dị nro na njedebe (belụsọ na ị na-eji ozi a iji nyochaa ndị sonyere nyocha).
Nyochaa nyocha gị - Gbaa mbọ hụ na ị bu ụzọ nwalee nyocha gị yana ndị otu ole na ole n’ime ndị na - ege gị ntị na / ma ọ bụ ndị ọrụ ibe gị ị ga - enweta nsogbu na nkọwa a na - atụghị anya ya.
Tụlee oge gị mgbe ị na-ezipụ akwụkwọ ịkpọ oku - Ndekọ ọnụ ọgụgụ na-adịbeghị anya na-egosi nke kachasị elu na pịa site na ọnụego na-ewere ọnọdụ na Mọnde, Fraịde na Sọnde. Na mgbakwunye, nyocha anyị gosipụtara na ogo nzaghachi nyocha adịghị iche site na izu ụka ruo izu ụka.
Ziga nyocha ihe ncheta email - Ọ bụ ezie na ekwesighi nyocha niile, izipu ndị na-echetabeghị ndị na-azabatabeghị na mbụ nwere ike inye nnukwu mmụba na ọnụego nzaghachi.
Tụlee inye onyinye- Dabere n'ụdị nyocha na ndị na-ege ntị, inye onyinye na-adịkarị irè iji meziwanye usoro nzaghachi. Ndị mmadụ na-enwe mmasị n’echiche inweta ihe maka oge ha. Nnyocha Zoomerang egosila na mkpali na-abụkarị kwalite nzaghachi nzaghachi site na 50% na nkezi.
Njikere ibido? Banye maka a free Zoomerang isi na akaụntụ, tinye usoro ndị dị n'elu, bido nyocha gị ma dị njikere inyocha nsonaazụ gị ozugbo. Nọrọ na-ege ntị na-abịanụ posts ebe m ga-amaba n'ime atụmatụ nyocha dị elu karị na ụzọ ndị ọhụrụ iji tinye usoro nyocha n'ịntanetị n'ime atụmatụ azụmaahịa gị dum. Obi ụtọ na nyocha!
You na-eji nyocha ntanetị maka azụmahịa gị ugbu a? Youchọtara ndụmọdụ ndị a dị ka enyemaka? Biko sonye na mkparịta ụka na ngalaba nkọwa dị n'okpuru.
Nov 26, 2014 na 6:22 AM
Daalụ maka ndị dị otú ahụ mara mma Atụmatụ :)